Xiriirka loo jaray Qadar oo jug wayn u gaystey hilinka BeIn Sports! (Xanibaad dhacday & tebiyayaal is casiley) – Gool FM
(Dooxa) 06 Juunyo 2017 – Ilaa 6 dal oo Carbeed ayaa shalay ku dhawaaqay go’aan la yaab lahaa oo xiriirka diblomaasiyadeed loogu jarayo dalka yar balse saamaynta ballaaran ee Qadar, dalalkaasoo ay horkacayaan Sucuudiga, Masar iyo Imaaraatka.
Yeelkeede, hadda arrintu waxay gaartey dhanka warbaahinta iyadoo ay dalalka Sucuudiga, Masar iyo Imaaraatku ay BeIn Sport ka mamnuuceen dalalkooda, waxaa sidoo kale is casilay weriyayaashii dalalkaa ka socdey ka shaqaynayay hilinkan ciyaaraha tebiya qaybtiisa afka Carabiga ku hadasha.
— رانيا ابي نادر (@Rania_bn) 5 juni 2017
Rania Abunader, oo ah tifaftiraha kanaalkan u jooga United Arab Emirates, ayaa sheegay in kanaalka laga xannibay dalka Saudi Arabia, waxaana xigtey dhowr weriye oo ciyaaraha tebiya ama falanqeeya oo u kala dhashay Masar iyo Sucuudiga, waxaana ka mid ah weriyaha wayn ee Fahd Al-Otaibi.
“Laacib Sucuudiyaan ihi kama soo muuqan doon Bein Sports kahor iyo kaddib ciyaarta Sucuudiga iyo Australia waana bixinaynaa ganaaxa,” ayaa lagu yiri war kasoo xiriirka Sucuudiga ee Saudi Football Association (SFA).
— عاشق المنتخب السعودي (@zxvfx) 5 juni 2017
Dalka Masar, Guddiga Fulinta ee Xiriirka Masar ee kubadda cagta oo uu hoggaamiyo Hani Abu-Rida, ayaa go’aansaday inay mamnuucaan la macaamilka Bein Sports oo ay u diideen inay yimaadaan xarumohooda, xitaa marka shir jaraa’id la qabanayo.
Laacibkii hore ee reer Masar ee Ahmed Hossam, oo ku caan ah magaca Midu, ayaa isna ku dhawaaqay inuu iska casiley BeIn Sports oo uu falanqeeye kubadeed ka ahaa, isagoo Twitter-ka ku caddeeyay warkan.
— Mido (@midoahm) 5 juni 2017
Laacibka dhiggiisa ah ee Masar iyo Al-Ahly ee Mohamed Abotreka, oo ay Mido kanaalkan iskala shaqaynayeen ayaa isagu shaqadiisa sii wadan doona, isagoo sheegay inuusan ku noqon karin Masar maaddaama laftiisa horay loogu eedeeyay inuu taageero Akhwaanul Muslimiinka Masar.
Ciyaar tebiyaha reer Imaaraat ee Cali Saceed Al Kacbi ayaa ku dhawaaqay inuu iska casiley shaqadii uu ka hayey Bein Sports channels, isagoo warkaa Twitter-ka soo dhigay sida ay faafinayso AFP.
“10 sanadood oo shaqo xirfadlenimo waxay abid ku waari doonaan qalbigayga,” ayuu qoray isagoo raaciyay. “Nabad gelyo dhamaan saaxiibada Bein Sports.”
رسميًا – انسحاب المعلق الاماراتي علي سعيد الكعبي والسّعودي فهد العتيبي من قناة beIN Sports بعد قرار قطع العلاقات مع قطر. pic.twitter.com/lhz4bY0XhL
— صحيفة كورة (@Kooorasaudii) 5 juni 2017
Ciyaar tebiyaha kale ee reer Imaaraat ee Fares Awad, ayaa isna qoray sidatan: “Waan joojiyay wada shaqayntii igala dhexeeysey Bein Sports channels, waxaana u mahad celinayaan sponsors-ka iyo dhamaanba walaalaha ii muujinayay jacaylka iyo qiimaynta.”
Labada Imaaraati ee Sultan Rashed iyo Hassan Al Jasmi, oo iyaguna u shaqaynayay Bein Sports, Al-Douri iyo Al-Ksaf, ayaa iyaguna is casiley, iyadoo ay dadka wax naqdiya arrintan aad u dhaliileen maaddaama la isku qasay waxyaabo lakala saari karey.
Waxaba ma fahmin zaaxiiboow markaa maxaa dhacaydee say wax leeyiin carabi